कामना सेवा विकास बैंकको अधिकांश सूचकमा प्रगति, वितरणयोग्य मुनाफा कति ? – Insurance Khabar
कामना सेवा विकास बैंकको अधिकांश सूचकमा प्रगति, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७८, आईतवार ०९:३८
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ७० करोड २ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको नाफा ४८४ दशमलव ९० प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ११ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।